Sawirada cuntada: talooyin, dalabyo iyo tabaha mobiilkaaga | Androidsis
Michael Hernandez | | Codsiyada Android, Sawir, Khiyaamada Android, Tababarada
Ma diidi doonno, sawirada cunnadu waxay noqdeen kuwa dhab looga barto barta Instagram iyo shabakadaha kale ee bulshada. La wadaag sawirada shaqooyinkeenii qurxinta, ama kuwa lagu sameeyay masjidka maqaayada qabow Waqtigan xaadirka ah waa kala-dambeynta maalinta, laakiin ma aha sida ugu fudud ee aan qiyaasi karno.
Waxaan rabnaa inaan ku barinno inaad ku qaadatid sawirrada cunnooyinka ugufiican mobilkaaga mahadsanid tabahaan iyo codsiyadaan. Nala garo sida aad sawiro uga qaadi karto cuntada una muuqato mid dhab ah saameyn, aaladdaada Android waxay ku xirnaan doontaa howsha natiijaduna waxay u qalantaa in lagu wadaago barta Instagram.
1 Farsamo si aad sawirro fiican uga qaadatid cuntada
2 Cunnooyinka loogu talagalay sawir qaadista cuntada
3 Tafatir sawirada cuntada
4 Sawirada cuntada ee loogu talagalay Instagram
Farsamo si aad sawirro fiican uga qaadatid cuntada
Sawir qaadista cunnada waxay u baahan tahay farsamo gaar ah, gaar ahaan haddii aan haysanno saxan run ah oo qurxoon oo horteenna ah oo aan dooneyno inaan siino sumcadda ay u qalanto. Gaar ahaan haddii aan raadineyno natiijada ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, ha cunin hamburger-ka wali, waxaan ku tusi doonaa sida loo sawiro qaar ka mid ah.
Waa muhiim inaan dhigno waxaan rabno inaan sawir ka qaadno "xarunta", Tan awgeed, waxaa la joogaa waqtigii la go'aamin lahaa haddii waxa muhiimka ahi uu yahay saxanka oo dhan, deegaanka, ama kaliya wax ka mid ah, waa inaan tixgelin siinno si natiijadu u noqoto mid lagu qanco.
Haddii tusaale ahaan aan dooneyno inaan sawirno hamburger, Waxa xiisaha leh ayaa ah inaan ka tarjumi karno sheyga oo dhan, oo ay ku jiraan goobta. Tani way fududahay, waxaan isku dhigeynaa dherer la mid ah sheyga oo haddii aan dooran karno "Qaabka sawirka" ee aaladda, markaa si ka fiican sidii hore, natiijada haddii aan wax sax ah sameyno way fiicnaan doontaa.
Haddii dhanka kale aan rabno fmaraq ama saladh Fikrad ahaan, waxaan ka soo qaadnaa sawirka kore, annaga oo aan ilaawin inay tahay inaan badeecada dib ugu dhigno xarunta. Dhanka kale, Haddii aan la kulanno wax soo saar xoogaa ka adag, waxaa laga yaabaa inaan ka fiirsanno inaan u dhowaanno oo aan diiradda saarno sheyga xiddigga.
Tani waa dagaal adag oo lagu guuleysto. Sida iska cad laydhku waa go'aan masawir ahaan, gaar ahaan kamaradda "ka xun". Haddii aan haysanno qalab heer sare ah ama astaamo wanaagsan, waxay u fududaan doontaa sida loo hawlgeliyo Habeenkii.
Si kastaba ha ahaatee, Nasiib darrose waa wax sii kordheysa in makhaayadaha laga shido iftiin yar. taas oo si weyn qalad ugu ah in sawirro fiican laga qaado taleefanka gacanta. Sababtaas awgeed, waxay noqon doontaa go'aan in aan hor istaagno badeecada oo aan qaadanno fursad aan ku hagaajino soo-gaadhista kamaradda.
Marnaba, duruuf kasta ha ku xusho tooshka. Ku dirida tooshka makhaayada waa laba sababood oo aasaasi ah:
Waxaad ka careysiineysaa martida inteeda kale.
Sawir qaadiddu waxay lahaan doontaa natiijo aan dabiici ahayn.
SHaddii, dhinaca kale, aad joogtid guriga, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad ka faa'iideysatid nalalka dabiiciga ah, tusaale ahaan daaqada agteeda. Haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan helno natiijooyin xirfad leh, waxaan ku qasbanaaneynaa inaan ku sharadno ilaha nalalka.
Dejintu badanaa waa muhiim, laakiin waa inaan go'aansanaa ilaa heerka. Way iska cadahay marka aynaan sawiro kula qaadanaynin cuntada foodda hore, muuqaalku wuxuu noqon lahaa mid aad muhiim u ah. Tan awgeed waa inaan hubinnaa inaan ku jirno jawi wanaagsan. Waa iska cadahay haddii aan doonayno inaan sawir ka qaadno saxankeenna imika la dhammeeyay, iyadoo jikada "rogmadaan", waxay u badan tahay inaan helayno wax dabiici ah laakiin aan ahayn natiijooyin aad loogu taliyo.
Taasi waa sababta ay tahay inaan u helno masraxa, waxaan ku siin doonnaa tusaalooyin deg deg ah:
Haddii aad makhaayad ku jirto, iskuday inaad iska ilaaliso in waxyaabaha la jarjaray ay ka muuqdaan saxanka dhexdiisa.
Hubso inaysan jirin wax cunto ah ama wasakh ah oo ku dul yaal marada miiska iyo miiska labadaba.
Haddii aan haysanno jawi wanaagsan, waxaa habboon inaan sawirrada ka qaadno wax yar ka durugsan si qurxinta loo qadariyo.
Si kastaba ha noqotee, waa inaan tixgelin siino waxa runti muhiimku yahay cuntada ama si sax ah goobtaas, saxanka ayaa lumin doona wax badan oo caan ah, sidaa darteed waa inaan isku daynaa inaan goobta ka dhigno mid had iyo jeer ixtiraam u leh cuntada aan rabno inaan sawirno. Kheyraad wanaagsan badanaa waa "Boomerang" barta Instagram, Tusaale ahaan, u dhowaanshaha saxanka oo leh meel u dhow meesha aad ka arki karto qurxinta masraxa, laakiin ku dhammee adiga oo sameeya qorshe faahfaahsan oo ku saabsan cuntada la sheegayo, waa wax fiican
Cunnooyinka loogu talagalay sawir qaadista cuntada
Mar labaad waxaan rabaa inaan saameyn ku yeesho taas qalabka waa inuu noqdaa mid la socda oo aan waligiis muhiimadda la xadin saxanka aan runtii dooneyno inaan sawirro ka qaadno, laakiin weligiis waxba kuma yeeli doono, waxaan kuu deynaa talooyin.
Isku dheelitirku waa qayb ka mid ah cuntada, haddii galaaskaaga khamriga ee caadiga ahi ka muuqan karo saxanka agtiisa, haka laba labayn ilbiriqsi, haa, ha iloobin inaad sheegto khamriga aad cabeyso.
Xullo dulucda iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, tusaale ahaan, haddii aad haysato baastada karbaarata ee wanaagsan, ma dhaawaceyso inaad dhabarka ku muujiso milix fiican oo basbaas ah. Soo bixi kooxdaada ugu hal abuurka badan.
Shaki la'aan kuwani waa xulashooyin qaarkood, laakiin xaaladdan waxay ku xirnaan doontaa deegaanka iyo badeecada la kariyey ee su'aasha laga qabo. Tani waxay ku siin doontaa sawir cunno xirfad leh.
Tafatir sawirada cuntada
Sida iska cad sawir cunada kama baxsanayo tafatirka. In Android waxaan leenahay liis ballaaran oo codsiyo loogu talagalay ujeeddadan, laakiin waxa xiisaha leh waa in laga caddeeyo fikradaha qaarkood:
Ka faa'iideyso fursad aad ku dheregtid midabada (adigoon dulmarin), si aad u ogaatid maaddooyinka si kasta oo ay u yar yihiin iyo dabiicadda wax soo saarka.
U fiirso nalalka iyo hooska, waxaa laga yaabaa inaad iftiimiso meelahaas mugdiga ah.
Ha iloobin madow iyo caddaan, miiraha B / W waligiis uma roona sawir cunto, sidoo kale sepia filter-ka
Kaamirooyinka taleefannada qaarkood sida Huawei, Samsung ama Xiaomi waxay leeyihiin qaab «AI», Sirdoonka Artiktikiska ah wuxuu ogaan doonaa inay tahay saxan raashin ah oo uu gacan kaa siin doono.
Sida ugu fiican ee sawirka aad uhesho, ayaa yaraanaya waxaad ubaahantahay inaad wax ka bedesho, laakiin waligood dhib malahan inaad maskaxda ku hayso tabahaan. Qaad sawirada cuntada ugu fiican sidan.
Sawirada cuntada ee loogu talagalay Instagram
Instagram wax badan ayey iska amaahisaa sawirrada cuntada. Tan awgeed waxaan leenahay waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo, in kasta oo labadayda ugu cadcad ay yihiin kuwa soo socda:
At @androidsisweb waxaan ka shaqeyneynaa buuga sawir qaadista cuntada, maxaad u maleyneysaa tijaabooyinka?
Fariin ay wadaagaan Miguel Hernandez (@ mh.geek) on Sep 12, 2020 at 10: 26am PDT
Albam: Ka faa'iideyso suurtagalnimada soo saarista "album" sawir leh oo aad awoodi doontid inaad ku darto suxuunta fadhiga oo dhan, sidaas darteed kuma duqeyn doontid kuwa raacsan sawirro badan.
Boomerang wanaagsan: Sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku muujiso jaleeco dhammaan suxuunta waqtigaa la adeegsaday, ama aad sameysato qorshooyin xiiso leh. Waxaad heli doontaa sawir sax ah oo ah cuntada xirfadleyda ah.
Waa ikhtiyaar wanaagsan barta Instagram inaad ka faa'iideysato inaad calaamadeyso, tusaale ahaan, nooca khamriga ee aad cabeyso, Ka faa'iideyso goobta si aad u xulato makhaayadda iyo dhammaan fursadaha ay codsigan bixiso, sidaa darteed kuwa raacsan ayaa kuu sahlanaan doona markay tahay helitaanka maaddooyinka ama goobta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sawir » Sawirada cuntada: talooyin, dalabyo iyo tabaha mobiilkaaga
Dib u eegista dhagaha sameecadaha OneOdio Studio iyo Studio Pro